Oromo Free Speech: Wayyaaneen Shira Marsaa 3ffaa Magaalaa Amboo Irratti Gaggeessuuf Yaaleen Uummata Oromoo magaalaa Amboo fi dargaggoota Oromoon Fashale
Wayyaaneen Shira Marsaa 3ffaa Magaalaa Amboo Irratti Gaggeessuuf Yaaleen Uummata Oromoo magaalaa Amboo fi dargaggoota Oromoon Fashale
Waxabajjii 22,2014 (qeerroo) - Mootummaan Wayyaanee olola afaan faajjii uumuun gaaffii mirga abbaa biyyummaa uummaanni Oromoo gaafachaa ture dhabamsiisuuf ykn sagaleen uumata cunqurfamaa akka hin dhagahameef jecha meeshaa waraanaa fi human waraanaan uumata nagaa goolaa fi jeeqaa jira.
Wayyaaneen dabballoota garaaf bitamanii fi kanneen afaan Oromoo dubbachuu malee dhalootan Oromoo hin ta’iin walitti qabuun namoota baay’inaan 100 hin callee of dura qabuun shira abdii kutannaa uummata keenya irratti gaggeessuun hubatamera. Keessaattuu uummaanni Oromoo jiraattootni magaalaa Amboo fi dargaggoonni Oromoo guutummaatti shira diinaa kana irraa qooda fudhachuun hojii dhabuun waammicha Wayyaanee irraa qooda kan fudhatu diina uummata Oromooti jechuun jibbinsa wayyaaneef qaban ibsataniru.
Gochaa Fashistummaa Wayyaanee kana balaaleffachuu fi dura dhaabbachuuf dargaaggootni oromoo fi uummaatni Oromoo Magaalaa Amboo ganda 03 naannoo M/B Sadarkaa tokkoffaa Cariitti walitti qabamuun uummaata warraaqsa gaggeessuuf jiru homaan waraanaa magaalaa Amboo irra qubsiifameen bitineeffaman, dargaggootni Oromoo 6 humna waraanaan qabamanii mana hidhaa wajjiraa poolisii Godina lixa shawaatti darbataman.
Sochii Mootummaan Wayyaanee gaggeesite kana keessatti hoomaan waraanaa uffata of irraa baasee uummata fakkachuun akka hiriira Wayyaanee irraa qooda fudhatu dirqisifaamee, humnootni milishaa fi poolisaa illee haaluma kanaan akka ba’an qajeelfama wayyaanee hojirra olchuuf dirqaman illee gochaa kana rawwachuu irra fedhii akka hin qabnee odeessii keessa isanii ba’aa jiru ifa godhee jira. Kana malees Wayyaaneen abdii kutatee waan qabee gadhiisuu wallaale kun sabaa fi sablammoota biyyaatti jiraattoota baadiyaa fi dabbaloota Wayyaanee garaa qofaaf jiraattan baadiyaa irraa walitti qabuun xaa’oo fudhattanii galtu jechuun uummata gowwomsaa ture, Uummaanni Oromoo baadiyaa Magaalaa shira wayyaanee irratti dammaqee gaafa dura dhaabbatuu, saboota kanneen gowwomsuun olola isaa oofuuf yaalii akka godhee hubachuun danda’amera.
Qondalootni Wayyaaneef ergamanii jiraatan walga’ii maqaa hiriira baha nu deeggara Wayyaanee kana gaggeessuuf wareegaman biro bishanii fi albuudaaf energy Oromiyaatti nama Mootummaa Maqaasaa jedhamuu fi bulchiinsa Godina Lixa Shawaa wayyaaneedhaan doorsifamaa jiru nama maqaan isaa jedhamuu fi dabbaloota ilmaan TPLF maqaa isaanii dhoksuun waltajjichaa gaggeessuuf bobbaafaman yoo ta’uun, haaluma kanaan dabballootni kunneen namoota miseensota,:Waraanaa, milishaa, poolisa, sabaaf sablamoota Oromiyaa Lixa shawaa naannawaa Amboo jiraattan fi dabbaloota humnaan dirqisiifaman dabalatee namootni lakkofsaan 100 hin caallee Isteediyeemii Ambootti humna waraanaa guddaan marfamanii ololaa afaan faajjii wayyaaneen uummata Oromoo irratti gaggeessuun saaxilamee jira. Haala kana irraa Wayyaaneen Ololaa TV olola kijibaaf tolu waan waraabdu dhabdee dabballoota godinaa dorsisaa turuun ni yaadatama. Sochii kanaan walqabatee Magaalaan Amboo humna waraanaa guddaan marfamtee eegamaa jirti. Haala kanaarraa uummaanni oromoo magaalaa amboo fi nannawaa ishee gochaa diinummaa dhiiga namaadanfisuu kanatti aaruun wareegama qaalii kan faluuf qopha’aa jiraachuun sochii uummataa irraa hubatamee jira. Wayyaaneen diddaa uummata Magaalaa Amboo fi dargaggoota kanatti waan haalan yaaddoofteef dabbaloota fi garaaf bultoota, akkasumaas ilmaan saboota biroo walitti qabdee kanaan callisanii gargar bittinna’uun gara mana isaanitti akka galaan goochuun soda jiruu dabballootuma meeshaa diinaa kanaaf saaxiluun illee hubatamera.
Uummaanni Oromoo godina lixa shawaa fi Magaalaa Amboo fi naannawaa ishee sagantaa wayyaaneen fuldratti gootu kamuu dura dhaabbachuu fi lagannoo (boycotts) gochuuf dhaamsa waliif dabarsaa jiraachuun hubatamera.